फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्छन् कोरोना अस्पताल? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्छन् कोरोना अस्पताल?
कल्पना पौडेल आईतबार, पुस १९, २०७७, ०७:१५:००
काठमाडौं- नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेपछि उपचार सेवा सुरु गर्ने पहिलो अस्पताल हो, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल।
अस्पतालले तत्कालीन समयमा सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि संक्रमितको सुरक्षित रुपमा उपचार सेवा दिन सफल भयो। सुरुवाती दिनमा उपत्यकामा फेला परेका अधिकांश संक्रमितको उपचार सरुवा रोग अस्पतालमै भइरहेको थियो।
तर, अस्पतालले विभिन्न चुनौती र समस्याको सामाना गर्दै संक्रमितको उपचार गर्न थालेको अस्पतालमा अर्को एउटा समस्या आइपर्‍यो।
उक्त समस्या थियो– संक्रमितको उपचारका क्रममा अस्पतालबाट निस्किएका अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापन।
कोभिड–१९ संक्रामक रोग भएका कारण संक्रमितको उपचारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गरेका उपचार सामग्री तथा संक्रमितले प्रयोग गरेका सामग्रीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अस्पतालमा निकै अन्योल छायो।
अस्पतालमा विगतमा अन्य संक्रामक रोगको उपचार भइरहेको र त्यस क्रममा निस्किएका अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनको अनुभव थियो। सोही अनुसार अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचारका क्रममा निस्किएका स्वास्थ्य सामग्री तथा फोहोरलाई वैज्ञानिक ढंगले निसंक्रमण गर्ने काम गर्‍यो। तर निसंक्रमण गरेको फोहोरलाई फाल्ने काममा भने जटिलता आयो। कोरोना सर्ने डरले नगरपालिकाको फोहोर उठाउने व्यक्तिहरु त्यहाँ गएनन्। न त फोहोर खरिद गर्ने मानिसहरु नै गए।
कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी फैलिइरहेको छ भन्ने विषयमा अन्योल रहेको र सुरुवातमा त्रास बढी भएकाले अस्पतालमा फोहोर थुप्रिँदै गयो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालले फोहोरको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समयमा नै उचित गाइडलाइन दिन सकेको थिएन। त्यसपछि अस्पतालले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वैज्ञानिक ढंगबाट निसंक्रमण गरिएका फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सुरु गर्‍यो।
अस्पतालका निर्देशक डा सागर राजभण्डारीका अनुसार अस्पतालले अहिले स्वास्थ्यजन्य फोहोरलाई निर्मलीकरण (अटोक्लेभ) गरी छुट्याएर काम नलाग्ने फोहोर महानगरपालिकामार्फत र अन्य पुनः प्रयोग हुने बिरामीले प्रयोग गरेका कपडा, पिपिई लगायतका सामग्री अस्पतालमा नै वैज्ञानिक ढंगमा सफा गर्ने गरिएको छ।
सरुवा रोग अस्पताल मात्र होइन, सुरुका दिनमा संक्रमितको उपचार गर्ने पाटन, सशस्त्र प्रहरी कोभिड अस्पताल बलम्बुले पनि निकै समस्या भोग्नु परेको थियो।
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल मात्र नभई क्वारेन्टाइन तथा संस्थागत आइसोलेसन सेन्टरमा पनि फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्वनिर्देशक भोगेन्द्र डोटेल। उनको अनुसार फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा धेरै समस्या परेको भनेको चीनबाट उद्धार गरिएर ल्याएका १७५ जनाको हो।
‘चीनबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्दा १७५ जनाबाट झन्डै एक सय बाल्टिन फोहोर निस्केको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एयरपोर्टमा नै तीन दिनसम्म अड्केको थियो।’
महानगरपालिकाको फोहोर बोक्ने टिमले फोहोर बोक्न नमानेपछि बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालले कोभिड वार्डको फोहोर अस्पतालमै व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ।
अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा प्रवीण नेपाल भन्छन्, ‘सुरुसुरुमा कोरोना कसरी सर्छ भन्ने अन्योल रहेकोले हरेक मानिसमा डर थियो। महानगरले पनि कोभिड वार्डको फोहोर बोक्न मानेन। हामीले पनि फोर्स गर्न सकेनौँ। त्यसैले अस्पताल पछाडि नै व्यवस्थापन गर्न थाल्यौँ।’
चीनको बुहानबाट १७५ नेपालीलाई उद्धार गरी भक्तपुरस्थित खरिपाटीमा बनाइएको आइसोलेसनमा राख्दा त्यहाँ उत्पादन भएको फोहोर व्यवस्थापनमा पनि समस्या भएको थियो।
त्यहाँको नेतृत्व गरेका नेपाली सेनाका डा नवीन फुयाँलले एक दिनमा धेरै क्षमतामा फोहोर उत्पादन भएको भन्दै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तुरुन्तै जवाफ दिनका लागि अनुरोध गरेको अनुभव सुनाए।
टेकु अस्पतालले अहिले फोहोरलाई संक्रमणरहित बनाई निर्मलीकरण गरेर ब्यागमा प्याक गर्ने गरेको छ। ‘प्रयोग भएको पिपिई अरुले प्रयोग नगरुन् भनेर च्यातेर अनि फोहोर ब्यागमा प्याक गर्ने गर्छौं,’ निर्देशक राजभण्डारी भन्छन्।
नेपालमा कोरोना संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले केही अस्पताललाई संक्रमित मात्र राख्ने अस्पतालको रुपमा सूचीकृत गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सरकारी र निजी गरी ७४ वटा अस्पताल सूचीकृत गरिएको छ।
संक्रमितहरुको उपचार गर्ने अस्पतालको फोहोर अन्य अवस्थामा भन्दा थप जोखिमयुक्त हुन्छन्। संक्रामक र सामान्य फोहोरलाई समयमा नै छुट्याउन सकिएन भने अस्पतालका सबै फोहोर संक्रामक हुन्छन् र त्यसले गम्भीर असर निम्त्याउने खतरा रहन्छ। सामान्यतयाः अस्पतालबाट निस्कने फोहोरमध्ये २० प्रतिशत फोहोर संक्रामक हुन्छन्। तर अस्पतालभित्र नै त्यसलाई छुट्याइएन भने सतप्रतिशत फोहोर संक्रामक हुनपुग्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई संक्रामक, सामान्य, कुहिने, नकुहिने गरी हरेक वार्ड तथा विभागमा नै छुट्याउन आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि ती फोहोरलाई अटोक्लेभ गरी वा माइक्रोवेब जस्ता वातावरणमैत्री प्रविधिबाट निर्मलीकरण र व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा गर्न सम्भव नभए ७ दिनसम्म सुरक्षित रुपमा भण्डारण गरी सुरक्षित तरिकाले खाडलमा पुर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ।
असारमा बल्ल आयो अन्तरिम निर्देशिका
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असारमा कोभिड–१९ महामारीको आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन अन्तरिम निर्देशिका समेत जारी गरेको छ।
उक्त निर्देशिकामा सबै बिरामी (कोभिड–१९ संक्रमित, कोभिड शंकास्पद लगायत) लाई स्याहार गर्दा उत्पादित सम्पूर्ण फोहोमैलालाई संक्रमित फोहोरमैलाको रुपमा लिने र उक्त फोहोर प्रष्ट लेबल लगाइएका भाँडाहरु बाल्टिन÷बिनमा र धारिलो वस्तुहरुलाई सुरक्षित बक्सभित्र संकलन गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्यजन्य फोहोमैला व्यवस्थापनका चरणहरु जस्तैः फोहोर कम उत्पादन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, संकलन गर्ने, ओसारपसार गर्ने, भण्डारण गर्ने, उपचार गर्ने र विसर्जन गर्ने विषय निर्देशिकामा उल्लेख छ।
हाल केही अस्पतालहरुमा मात्र राम्रो तथा व्यवस्थित स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा छन्। जहाँ फोहोर निर्मलीकरण गर्ने अटोक्लेभहरु प्रयोग भइरहेका छन्।
प्रायःजसो अस्पतालले अस्पताल हाताभित्रै खाडल बनाई फोहोर जलाउने गरेको पाइन्छ भने केही अस्पतालले नगरपालिकाको गाडीमार्फत सिधै ल्यान्डफिल साइटमा पठाउने गरेको देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले स्वास्थ्यकर्मी, सेवाग्राही, बिरामी कुरुवा, फोहोर छुट्याउने र छान्ने व्यक्तिहरु र सो क्षेत्रको नजिक बसोबास गर्ने आमसमुदायमा गम्भीर वातावरणीय र स्वास्थ्य संकट निम्त्याउने खतरा रहेको छ।
उक्त निर्देशिकाले फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विभिन्न चरण समेत छुट्याएको छ। जसमा फोहोरमैलाको उत्पादनलाई घटाउने, फोहोरमैलालाई छुट्याउने÷वर्गीकरण गर्ने, फोहोरमैला संकलन, ओसारपसार तथा भण्डार, फोहोरमैलाको उपचार, फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै खाल्टो खन्ने र पुर्ने विधि, प्राकृतिक रुपमा नै नष्ट हुन छाडिदिने, विर्सजन र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य चरणहरु फलो गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोरलाई जोखिमयुक्त र साधारण फोहोरको रुपमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।
जोखिमयुक्त फोहोरको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका कर्मचारीहरु सँगसगै समुदायलाई पनि संक्रमणको डर हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने ८५ प्रतिशत फोहोर जोखिमरहित र १५ प्रतिशत फोहोर जोखिमयुक्त हुन्छ। यो १५ प्रतिशत फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसले संक्रमण थप बढाउँछ।
कोभिडको समयमा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सम्पूर्ण फोहोर संक्रमणयुक्त हुन्छन्। संक्रमित व्यक्तिले खाएको खाना, भाँडा र छोइएका कागज, प्लास्टिक लगायतका सामान्य फोहोर समेत जोखिमयुक्त मानिन्छ। स्वास्थ्य संस्था, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबाट निस्कने सबै फोहोर व्यवस्थापनमा सर्तकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
अस्पतालमा निस्कने फोहोरमध्ये कुहिने फोहोर हरियो बाल्टीमा, नकुहिने फोहोर निलो बाल्टीमा, प्याथोलोजिकल, धारिलो औषधिजन्य तथा साइटोटोक्सिक फोहोर रातो बाल्टीमा, जोखिमयुक्त रासायनिक फोहोर पहेंलो र जोखिमयुक्त रोडियोधर्मी फोहोर कालो रङको बाल्टिनमा जम्मा गरिन्छ।
अहिले कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसनमा उपचारत रहेकाहरुले त्यसरी छुट्याएर राखेका बाल्टिनमै फोहोर राख्ने गर्छन्। बाल्टिनमा पहिले नै प्लास्टिकको झोला राखिएको हुन्छ। त्यो बाल्टिन भरिएपछि अस्पतालका सरसफाइ कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा (पिपिई) लगाइए ती बाल्टिनमा संक्रमणरहित बनाई त्यो झोलाको मुख राम्रोसँग बाँधेर फोहोर बोक्ने ट्रलीमा बाँधेर फोहोर संकलन गर्ने स्थानसम्म लैजाने गर्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका अनुसार फोहोरमैला संकलन, ओसारपसार तथा भन्डारण गर्न सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण संक्रमित फोहोरलाई स्पष्ट रुपमा लेबल गर्नुपर्ने, धारिला फोहोरहरुको लागि नछेडिने र अन्य फोहोरको हकमा बायो हजार्ड ब्याग सहितका नफुटने, छिद्र नभएका भाँडाहरु (बिर्का भएका बिन, बाल्टी) मा सुरक्षित तरिकाले संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी छुट्याएको संक्रमण नभएको फोहोरमैलालाई पनि सुरक्षित रुपमा संकलन गरी बलियो प्लास्टिकको झोलामा बाँध्नुपर्छ र सावधानीपूर्वक नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीमा पठाउन सकिने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ।
अस्पतालभन्दा बाहेकका स्थान जस्तैः क्वारेन्टाइन केन्द्र (होम र होटेल क्वारेन्टाइन सहित), होल्डिङ क्षेत्रहरु तथा आगमन विन्दुमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मास्क, ग्लोब्स आदि र अन्य कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सबै नकुहिने फोहोरलाई छुट्टै सुरक्षित रुपमा बनाइएको व्यागमा संकलन गरी मुख बाँधेर राख्नुपर्ने, यसरी बन्द झोलालाई ०.५ प्रतिशत क्लोरिनको झोलले बाहिरबाट पुछेर राख्न सकिने उल्लेख छ। त्यसपछि ती फोहोरलाई आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक ढंगले जलाउने, गाड्ने वा स्थानीय निकायको सहयोगमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
यसका साथै अन्य संक्रमित फोहोर जस्तैः रगत तथा शरीरका अन्य तरल पदार्थ मिश्रित फोहोरमैला, प्रयोगशाला नमुना, प्रयोग गरिएका केमिकल, स्वाब, पट्टी, कपास, प्रयोग भएका उपचार सामग्री, मानव अंग, तन्तु, धारिलो वस्तुलाई पूरै बन्द हुनेगरी बायोहाजार्ड चिह्न भएको भाँडामा जम्मा गर्नुपर्छ र छुट्टै संक्रमणमुक्त गर्ने प्रक्रियामा लानुपर्छ। यस्तो अति संक्रमित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन उत्पादन भएदेखिको २४ घन्टा भित्रमा गरिसक्नुपर्ने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ।
घरेलु बिरामी स्याहारमा प्रयोग हुने ग्लोब्स, मास्क र अन्य फोहोरलाई बिर्को भएको फोहोर संकलन गर्ने भाँडामा बिरामीको कोठाभित्र नै राख्नुपर्छ र संक्रमित फोहोरको रुपमा उचित विसर्जन गर्न सकिन्छ।
अस्पताल कर्मचारीलाई तालिम
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि जर्मन विकास सहयोग (जिआइजेट)ले सात प्रदेशका १३ वटा कोभिड अस्पतालका कर्मचारीलाई फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिएको छ। यसका साथै जिआइजेटले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण समेत सहयोग गरेको छ।
जिआइजेटले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, मेची अस्पताल, सगरमाथा अस्पताल, जनकपुर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, लुम्बिनी अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, सेती अस्पताल र महाकाली अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ।
तीन दिनसम्म एयरपोर्टमा रहेको सय ड्रम फोहोर यसरी व्यवस्थापन भयो
भोगेन्द्र डोटेल, पूर्वनिर्देशक, व्यवस्थापन महाशाखा
फोहोरलाई वातावरणमैत्री बनाएर मात्र व्यवस्थापन गर्छौं
डा सागर राजभण्डारी
निर्देशक, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल
फोहोर व्यवस्थापन कार्य अरुको र हाम्रो अस्पतालको फरक छ। हामीलाई सुरुवातका समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भयो। अहिले भने हामीले अस्पतालभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ।
केही दिन महानगरबाट फोहोर लिन आउने टोली पनि आएन, फोहोर किन्न आउने मानिस पनि आएनन्। तर केही दिनपछि त्यो समस्या छलफल गरी समाधान भयो। अटोक्लेभ गरी फोहोरलाई वातावरणमैत्री बनाएर मात्र व्यवस्थापन गर्छौं।
अन्य फोहोर पनि गल्ने, नगल्ने, पुनः प्रयोग गर्ने, नगर्ने सबै छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। सबै फोहोर पहिला संक्रमणरहित बनाएर अनि छुट्याएर राखिन्छ।
अहिले बिरामीले लगाउने डे«स, बेडको तन्ना, ओड्ने कपडा अस्पतालमै सफाइ गर्छौं। पहिले त्यसलाई संक्रमणरहित बनाएर ९० डिग्रीको तातोपानीमा डुबाएर अनि वासिङ मेसिनमा राख्छाँै। घाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्छौं।
हामीले कोभिडका बिरामी राख्ने भवनका वार्डमा सक्सन मेसिन पनि राखेका छौँ। त्यो मेसिन कोभिडका बिरामी राख्न थालेपछि लकडाउनका समयमा राखएको हो। त्यो मेसिनले बिरामी राखिएको कोठाको हावालाई संक्रमणरहित बनाएर छानेर बाहिर फाल्छ। जसको कारण संक्रमण अन्यत्र फैलन पाउँदैन। बाहिर हावामा मिसिँदा पनि संक्रमण हुँदैन।
म निर्देशक भएर आएपछि अस्पतालमा फोहोर जलाउन बन्द गरको छु। अहिले सबै जल्ने, कुहिने, पुनः प्रयोग गर्ने फोहोर बाहिर जान्छ। त्यो विधि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हो। त्यसबाट निस्कने धुवाँ वातावरण र मानिस सबैलाई असर गर्छ।
हामीले पुनः प्रयोग गर्ने फोहोर बिक्री पनि गर्छौं। त्यसबाट वार्षिक २ लाख जति आम्दानी पनि हुने गरेको छ।
फोहोर व्यवस्थापन अस्पतालभित्रै गर्छौं
डा प्रवीण नेपाल
सशस्त्र प्रहरी कोभिड अस्पताल, बलम्बु
हामीले कोभिड–१९ का बिरामी राख्न थालेदेखि नै त्यहाँबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन अस्पतालभित्रै नै गर्दैै आएका छौँ।
महानगरपालिकाले कोभिडका बिरामीबाट निस्कने फोहोर बोक्न नमानेपछि हामीले पनि फोेर्स गर्न सकेनौँ। सुरुका दिनमा एकदमै डराउने अवस्था पनि थियो।
महानगरले बोक्न नमानेपछि हामीले अस्पताल पछाडि रहेको खाली स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्यौँ। अटोक्लेभ गरी कुहिने र गाड्न मिल्ने फोहोर गाड्छौँ। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने केही फोहोर हामीले निर्मलीकरण गरेर पनि प्रयोग गर्छौं। पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने र गाड्न नमिल्ने फोहोरलाई जलाउने गरेको छाँै।
फोहोर गाड्न तीन वटा ठूलाठूला खाल्टा बनाइएको छ। पालैपालो त्यसमै गाड्छौँ। जलाउने फोहोर पनि सिधै भुईंमा राखेर जलाउँदैनाँै। फलामको राख्ने स्थान बनाइएको छ। त्यहाँ नै जलाएर धुवाँ व्यवस्थापन गर्ने पाइप बनाइएको छ।
नन्कोभिड बिरामीको फोहोर भने पहिलेदेखि नै महानगरपालिकाको गाडीले नै लैजाने व्यवस्था छ।
हामीकहाँ मिलेर काम गरौं भन्ने संस्कार नै छैन
डा नवीन फुयाँल
हामीले चीनबाट ल्याइएका १७५ जना मानिस भक्तपुरको खरिपाटी आइसोलेसनमा राखेका थियौँं। उक्त समयमा संक्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने अन्योल थियो। त्यसैले हामीले उताबाट ल्याइएका व्यक्तिहरुका लागि ह्युमन बेस्डका लागि छुट्टै सेफ्टी ट्यांकी पनि बनाएका थियौँ।
हुन त त्यो जरुरी रहेन छ अहिले आएर बुझ्दा। तर नयाँ रोग, कसरी फैलन्छ भन्ने जनाकारी नभएकाले सबैखाले सम्भवनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा अपनाएका थियौँ। त्यहाँ अन्य अस्पतालजन्य फोहोर थिएन। खाना, ह्युमन बेस्ड मात्र थियो।
त्यहाँबाट एक दिनमै निकै ठूलो परिणाममा फोहोर निस्कन्थ्यो। अत्यधिक फोहोर जम्मा भएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या भयो। नेपालमा भएको अटोक्लेभ ६०÷७० लिटर क्षमताको मात्र हुने रहेछ। कम क्षमताको भएकाले समस्या भयो। किनभने, हामीले नगरपालिकाको सहयोग पाएनौँ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा निर्णय गर्न अनुरोध गर्‍यौँ। मन्त्रालयले हामीलाई यसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नूस् भन्यो। त्यसपछि सोही ठाउँमा निकै गहिरो खाडल खनेर फोहोर डम्प गरेका थियौँ। डम्प गर्दा पनि त्यसलाई अटोक्लेभ संक्रमणरहित बनाएर मात्र गर्ने गरेका थियौँं। त्यस बाहेक एक÷दुई पटक मात्र हामीले कागजजन्य फोहोर जलायौँ। त्यसपछि बन्द गरियो।
खासगरी, खानाबाट निस्कने फोहोरको मात्रा अत्यधिक थियो। अन्य फोहोर धेरै भएन। २ पटक उहाँहरुको प्रयोगशाला परीक्षण भएको थियो। त्यसबाट निस्केको फोहोर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोलीले नै लगेको थियो।
बाहिरतिरको अभ्यास हेर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम वातावरण मन्त्रालयले बनाउँछ। वातावरण मन्त्रालयले अस्पतालबाट निस्केको फोहोर कहाँ लगेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाउने र नगरिपालिकाहरुले सो अनुसार गर्ने गर्छन्। तर हाम्रोमा सबै जिम्मा अस्पतालको मात्र हो कि जस्तो देखिन्छ। अस्पतालमा त्योसँग सम्बन्धित मान्छे पनि छैनन्।
नयाँ अस्पताल स्थापना गर्दा स्वास्थ्य, वातावरण मन्त्रालय मिलेर कसरी फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ, कसरी हुनुपर्छ, भएन भने के सजाय हुने भन्ने कुरा कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। हामीकहाँ त्यो कमजोरी छ। अस्पतालहरुले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी काम आफैं गर्छन्। त्यसको नियमित नियमन पनि हुँदैन।
अहिले पनि कोभिडका सन्दर्भमा धेरै आइसोलेसन सेन्टर बनेका छन्। ती सेन्टरहरु अन्य महामारीको समयमा पनि काम लाग्छन्। त्यसैले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँबाट निस्केका फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। हामीकहाँ त्यही कुराको नै कमी छ।
अटोक्लेभ मेसिनमा निर्मलीकरण गरेर मात्र फोहोर डिस्पोज गर्छौं
डा रवि शाक्य
निर्देशक, पाटन अस्पताल
पाटन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउँदादेखि नै हामीले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पनि सोचेका थियौं। फोहोर व्यवस्थापनको लागि हाम्रो एउटा सिस्टम छ। यसलाई अहिले परिमार्जन मात्र गरिएको हो। कोभिड वार्डभित्र नै कुनै पनि चिज डिस्चोज गर्दा भित्रबाट नै संक्रमण हुने÷नहुने छुट्याएर क्लोरिनेसन गरेर डिसइन्फेक्ट गर्ने, डिसइन्फेक्ट गरेको कुराहरुलाई निर्मलीकरण गर्ने गनुपर्छ।
हामीले अटोक्लेभ मेसिनमा निर्मलीकरण गरेर मात्र फोहोर डिस्पोज गर्ने गरेका छौं। यसमा पनि चुनौती छ। किनकी अचानक लोड बढेको छ। दैनिक पञ्जा मात्र ३५ सय जोडी खपत हुन्छ। यो भनेको एकदम धेरै हो। त्यसैले सही रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती छ। अचानक फोहोरको लोड बढ्यो तर क्षमता बढ्न सकेन।
हामीसँग तीन वटा अटोक्लेभ मेसिन छ। जसमध्ये दुई वटा मेसिन बिग्रिएको थियो। पहिला एउटा मेसिनले सबै हुन्थ्यो। तर अहिले एउटाले धान्न सक्दैन। त्यसैले हामीले बिग्रिएको मेसिन बल्लबल्ल एउटा बनाएका छौं। अहिले दुई वटा मेसिनले काम गरिरहेका छन्।
यसले पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन। दुई वटा मेसिन २४सै घन्टा चल्छन्। त्यही भएर हामीले अर्को मेसिन थप्ने तयारी पनि गरेका छौं। तर हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै सम्झौता गरेका छैनौं। सबै मापदन्ड पुरा गरेर नै व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।
अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छैन
डा सन्तकुमार दास
हामीसँग फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुई वटा सिस्टम छन्। एउटा फोहोर व्यवस्थापन भनेर छुट्टै संस्था छ। यसले व्यवस्थापनको काम गर्छ। हामीले संक्रमण हुने र नहुने फोहोर छुट्याएर निर्मलीकरण गरी रिसाइकल गर्न मिल्नेलाई रिसाइकल गर्ने गरेका छौं।
हामी फोहोरलाई इन्फेक्टेड र ननइन्फेक्टेड भनेर छुट्याउँछौं। तर कोभिडको सबै फोहारलाई इन्फेक्टेड भनेर राख्छौं। त्यही कोभिडको सबै फोहोर एकै ठाउँमा डिस्पोज गर्छौं।
फोहोर व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म हाम्रो हाउस किपिङको टिमले कुनै गुनासो गरेको छैन। हामीले धानिरहेका छौं। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै समस्या छैन। किनभने, यो इन्सुलिरेसनमा पहिला ननकोभिडको फोहोर पनि जान्थ्यो। अहिले यसमा कोभिडको फोहोर मात्र जान्छ। त्यसैले अहिलेसम्म व्यवस्थापनमा समस्या छैन।